Dadka qaba xanuunka COVID19 OO kun kor u dhaafey Soomaaliya – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Dadka qaba xanuunka COVID19 OO kun kor u dhaafey Soomaaliya
Maanta oo ay tariikhdu tahay 10 May 2020, Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka ayaa ku dhawaaqday xaaladaha cusub ee caabuqa COVID-19, xaaladaha la xaqijiyay ayaa ah 57 xaaladood. Xaaladahaan waxaa lagaso xaqiijiyay 3 kamid ah maamul goboleedyada dalka.
Gobolka Banadir ayaa laga xaqiijiyay 23 xaaladood, Maamulka Somaliland 17 xaaladood iyo Maamulka Puntland 17 xaaladood.
Wadarta guud ee xaaladaha caabuqa ayaa ah 1054 xaaladood, waxaa geeriyooday 3 bukaan, waxaana bogsooday 8 bukaan.
Wasiirka ayaa bulshada ku adkeesay ahmiyada ay leedahay in lagu dadaalo xakameynta caabuqa maadama ka hortaggu uu ka wanaagsan daweynta, waxaa muhiim ah in lagu dadaalo siyaabaha looga hortago caabuqa maadama ay qatartiisu tahay mid aad badan.
10 May 2020: Warbixinta COVID-19 ee Soomaaliya.
> Laga Helay: 57
> Benadir: 23
> Puntland: 17
> Somaliland: 17
> Lab: 41
> Dhedig: 16
> Bogsasho: 8
> Dhimasho: 3
> Tirada Guud Laga Helay: 1,054
> Bogsashada Guud: 118
> Dhimashada Guud: 51
Previous articleSheekh shariif oo ka hadley diyaaradii itoobiyanku soo rideen
Next articleTiradii ugu badneyn oo la helay COVI19 Itoobiya
Ciidamada Kenya oo askari Soomaali ah dilay iyo Dagaal dhexmarey Ciidamada...